के गगनले जोगाउलान त काग्रेसको साख ? | Success Open University
चुनाब नजिकिदै गर्दा राजनीतिमा अनेक कुराहरू हुन्छन । कोहि नयाँ पार्टीमा प्रबेश गर्छन त कसैलाई नयाँ जिम्वेवारीको चिठ्ठा पर्छ त कसैको भएको नि खुस्किन्छ । पार्टी र नेताहरूलाई जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्ने दबाव हुन्छ । फेरि यो चुनाव त ५ बर्षसम्म दल र नेताहरुको भाग्य फैसला गर्ने चुनाब भ‍एकोले सबै अस्त्र प्रयोग गरेर भएपनि चुनाब जित्नै पर्ने भएको छ ।
यहि चुनाबी मेसोमा ‍‍एमाले र माओबादी लगायत अन्य दलले बाम तालमेल गरे सगै झस्किएको काग्रेसले चुनाब जित्ने रणनीति अन्तर्गत पार्टीका युवा नेता गगन थापालाई पार्टी प्रबक्ताको महत्वपुर्ण जिम्बेवारी दिएर कार्यकर्ता र मतदाताको मनोवल उच्च बनाउने कोसिश गरेको छ ।
समकालिन युवा नेतामा सबैभन्दा आशालाग्दा नेता गगन थापा यस अघि स्वास्थ्य मन्त्रिको रुपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन । उनले मन्त्रि हुदा गरेका लोकप्रिय कामले जनताको मन निक्कै जितेका छन । त्यसैको परिणाम हुन सक्छ, काग्रेस समर्थकहरूले सामाजिक संजालमा पार्टीले चुनाब जित्न गगन थापालाई प्रधानमन्त्रिको रुपमा प्रस्ताब गरेर जानु पर्ने धारणा अघि सारेका थिए । सायद गगन थापाको क्षमता र लोकप्रियतालाई बुझेर नै होला, बाम गठबन्धनको चेपुवामा परेको काग्रेसले चुनाब जितेर आफ्नो साख जोगाउन पार्टी प्रवक्तामा नियुक्त गरेको । तर चुनाबको मुखैमा नयाँ महत्वपुर्ण जिम्बेवारी सम्हालेका थापाले आफ्नो र काग्रेसको साख जोगाउन सक्छन या सक्दैनन ? हेर्न बाकि नै छ ।
← के प्रचण्डले पाउलान त नोबेल पुरुस्कार ? बिहान उठेर यस्ताकुराहरू पढ्नुहोस, तपाईको पुरै दिन उत्साहपूर्ण हुनेछ →